China Ice cream cpu fanamboarana sy orinasa | JAHOO
kaopy taratasy, Mety tsara amin'ny kafe, sôkôla mafana na zava-pisotro mafana na mangatsiaka hafa, Mety tsara amin'ny fampiasana trano na varotra. Mety amin'ny fivarotana dite ronono, fivarotana ronono soja, fivarotana mangatsiaka, trano fisakafoanana haingana, trano fisotroana kafe Dessert House Hotel, trano fisakafoanana, trano ary fialamboly maro karazana, hafanana be ...
kaopy taratasy, Mety tsara amin'ny kafe, sôkôla mafana na zava-pisotro mafana na mangatsiaka hafa, Mety tsara amin'ny fampiasana trano na varotra. Mety amin'ny fivarotana dite ronono, fivarotana ronono soja, fivarotana mangatsiaka, trano fisakafoanana sakafo haingana, trano fisotroana kafe Dessert House Hotel, trano fisakafoanana, trano ary fialamboly isan-karazany,
Ny hafanan'ny hafanana 100 DEG C, tsy misy fivoahana, tsy misy fofona, tsy misy fivoarana mora.
Kaopy taratasy sy famaritana ny rakotra
Kaopy mafana 8oz
Kaopy mafana 10oz
Kaopy mafana 12oz
Kaopy mafana 16oz
Kaopy mafana 20oz
Kaopy mafana 22oz
Sarony ho an'ny kaopy taratasy
mifanaraka 8oz dome sarony
mety 12 ~ 22oz sarony fisaka
mety 12 ~ 22oz dome fonony
Rindrina tokana / rindrina roa / rindrina Ripple
Taratasy virjina 100% kilasy sakafo
Pirinty natao pirinty / offset misy ranomainty kilasy sakafo
Mandray tsara ny sary famantarana sy ny endrika
T / T; L / C, sns
Azo zahana ny santionany maimaimpoana
Taratasy 1.Virgln miaraka amin'ny fanamarinana FSC & PEFC. Vokatra miaraka amin'ny taratasy fanamarinana FDA, LFGB, COC.
2.Flexo Priting miaraka amin'ny ranomainty naoty sakafo. Omeo endrika sy fonosana namboarina.
3.Our factory dia afaka manome karazana vokatra rehetra ilainao.
4.Ny orinasanay dia mitazona tranobe vaovao telo, izay mpanamboatra kaopy taratasy lehibe indrindra ao afovoan'i Sina, izay mirefy 46 hektara.
5.Ny orinasanay mitazona milina fandrakofana PE roa, milina fanontana efatra, milina 80 afovoany, milina haingam-pandeha 40 mahery ary mpiasa 400 mahery, miaraka amin'ny zavamaniry tsy misy vovoka.
6.Telo dia fanaraha-maso kalitao henjana sy fanatsarana kalitaon'ny vokatra.
7.We dia afaka manao ny maodelin'ny refin'ny vokatra.